Mogadishu Journal » 2021 » February » 10
(Akhriso) Golaha Midowga Musharixiinta oo ku baaqay Shir deg deg ah
Golaha Midowga Musharixiinta ayaa soo dhoweeyey shirka wadatashiga doorashooyinka ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo iyo soo jeedinta Puntland, Jubbaland iyo aqalka sare ee ah in shirkaas lagu qabto magaalada Muqdisho. Hoos ka akhriso War-saxaafadeed ka soo baxay golaha oo...
Xiddigii hore ee ciyaaraha NBA Stephen Jackson oo qaatay diinta Islaamka (Sawirro)
Xiddigii hore ee ciyaaraha NBA-da Maraykanka Stephen Jackson ayaa baraha bulshada ku shaaciyay inuu qaatay diinta Islaamka. Waxaa uu uga mahadceliyay heesaaga Mareykanka Tone Trump taageeridiisa iyo sidoo kale haweeney reer Canada ah oo hibo u siisay rooga salaada. Wuxuu sheegay...
Kenya oo dalab ku saabsan Soomaaliya u gudbisay Golaha amniga Midowga Afrika
Kenya ayaa mar kale ka hadashay xiisada kala dhaxeysa dowladda Soomaaliya ee sababtay in xiriirkii diblumaasiyadeed loo jaro Nairobi. Kenya ayaa ka sheegtay kalfadhigii Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika inaysan fara-gelin ku heynin arrimaha Soomaaliya, waxbana aysan ka...
Gudoomiyaha Aqalka sare oo taageeray Dalabkii Puntland baaq cusubna soo saaray
Muqdisho:-Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray ku taageeray baaqii maamulka Puntland ee ku aadanaa shirka uu Iclaamiyay Farmaajo in lagu qabto Muqdisho. Cabdi Xaashi ayaa sidoo kale ku baaqay in shirka...
Mareykanka oo ka walaacsan xaalada Soomaaliya baaq deg deg ahna ka soo saaray doorashada
Xili uu shir jaraa’id warbaahinta u qabanayay afhayeenka waaxda arrimaha Dibadda Mareykanka Ned price ayaa waxa uu kaga hadlay ismari waaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya kadib markii madaxda dowladda Federalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ay ku guuldareesteen iney heshiis...
Aqalka sare ee Dowlada Mareykanka ayaa ka walaacsan ismari waaga xiligan ka taagan doorashada Soomaaliya, xili uu dhamaaday mudo xileedka Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo walina aan heshiis laga gaarin doorashada dalka ka dhaceysa. Guddoomiyaha Guddiga Xiriirka Arrimaha Dibadda...
Juventus ayaa qaaday waddo wax ku ool ah oo ay ugu gudubtay finalka Coppa Italia oo ay la ciyaartay Inter, Andrea Pirlo wuxuu soo dhoweeyay isbarbardhiga Massimiliano Allegri. Andrea Pirlo wuxuu ku faraxsanaa inuu dib ugu laabto mustaqbalka si uu u xaqiijiyo booskiisa finalka...
In a 56-44 vote largely along party lines, the US Senate sets the stage for Trump’s second trial to begin on Wednesday. By Joseph Stepansky and William Roberts9 Feb 2021 The Senate impeachment trial of former President Donald Trump has begun. Tuesday’s proceedings...
Puntland oo kahor timid in Garawe lagu qabto Shirka Madaxweyne Farmaajo caawa iclaamiyay
Madaxweynaha dowlafa federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa caawa iclaamiyay shir arimaha doorashooyinka looga arinsanayo oo Garawe ku dhax maraya DF iyo dowlad gobleedyada. Madaxtootada Puntland qoraal kooban oo kasoo baxay caawa ayaa lagu soo dhaweeyay shirka uu...
Qarax weyn oo caawa ka dhacay Muqdisho iyo faahfaahino ka soo baxaya
Muqdisho:-Qarax aad xoogan ayaa caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo jugtiisa laga maqlay gudaha magaalada iyo meelaha ka baxsan. Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay agagaarka garoonka Ciyaaraha Eng. Yariisow oo ku yaalla degmada C/caiis ee gobolka...